ကားအကျစီဒနျ့ ဖွဈပွီး ထိခိုကျသှားတဲ့ နနျးသူဇာရဲ့ အဖွဈကို ဖှငျ့ဟလာတဲ့ ကြျောထှဋျဆှေ – စှယျစုံသုတ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….အနုပညာလောကမှာ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့နန်းသူဇာကတော့ မိသားဝင်တွေ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့အတွက် စိုးရိမ်သောကတွေနဲ့ စိတ်ပူပန်နေရပါတယ်..။
positive ဖြစ်နေတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို ကိုယ်တိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရပြီး ထပ်ကူးမှာစိုးလို့ ဖခင်နဲ့မောင်လေးကိုခွဲထားပေမယ့် မောင်လေးကပါနေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့် သွားခေါ်ရင်း လမ်းမှာ ကားဘေးတစ်ခြမ်းလုံး ကြေမွသွားအောင် ကားဖြတ်တိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်..။
ကားတိုက်မှုကြောင့် ကျော်ထွဋ်ဆွေကတော့ ချက်ချင်းလိုက်သွားခဲ့ပြီး ပူပန်မှုတွေကြောင့် face shield အောက်က မျက်ရည်လေးတွေနဲ့ဝမ်းနည်းအားငယ်နေတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့အကြည့်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ နေပါတယ်..။
နန်းသူဇာက ခါးပတ်ပတ်ထားလို့ ကြီးကြီးမားမားမထိခိုက်သွားပေမယ့် ပုခုံးလည်သွားပြီး ယောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောပြထားသလို အိမ်ထဲထိဝင်ပြီး မကူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျော်ထွဋ်ဆွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါ..။
“သူ့အမေ positive ဖြစ်လို့ အိမ်ကျဉ်းလေးထဲမှာ ပြုစုဖို့ခက်မယ်ဆိုပြီးမောင်လေးနဲ့သူ့အဖေကို တစ်ခြားပို့ထားတာ။မနေ့ကသူ့မောင်လေးပါဖျားရော။
အဲ့တာနဲ့ဒီနေ့ သူကိုယ်တိုင်ပဲဝတ်စုံပြည့်နဲ့ သူ့မောင်လေးကို အိမ်ကိုသွားပြန်ခေါ်လာခဲ့တာလမ်းမှာကားဘေးတစ်ခြမ်းကိုဖြတ်တိုက်ခံရတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ချက်ချင်းလိုက်သွားရတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် pressure တွေပိထားလည်းမသိဘူး။
သူ့ face shield အောက်က မျက်ရည်လေးတွေ နဲ့ အကြည့်ကို အခုထိ မြင်ယောင်တုန်းပဲ။
😔😔 လူက ခါးပါတ်ပါတ်ထားလို့ ဘာမှ မဖြစ်သွားဘူးဆိုပေမယ့် ပုခုံးတော့နဲနဲလည်သွားတယ်ထင်တယ်။ ယောင်နေတယ်။
ကားကတော့ တစ်ခြမ်းနီးပါးကြေသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်း အခု အိမ်မှာ လူကြီးတွေရော ကလေးတွေရော ရှိလို့ isolation လုပ်ရပါပြီ။
သဲလေးရေ… အဆိုးတွေ ကြိမ်းကြေသွားတယ်ပဲ မှတ်လိုက်ပါ။ you are stronger than me. 💪🏾🙏🏻😔 I hate this July. 😔..” ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက် ပူပန်နေရှာတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ လတ်တလောအခြေအနေတွေကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း နန်းသူဇာအတွက် ဆုတောင်းအားပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိတျသတျကွီးရေ….အနုပညာလောကမှာ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈသလို မျောဒယျသရုပျဆောငျတဈယောကျလညျး ဖွဈတဲ့နနျးသူဇာကတော့ မိသားဝငျတှေ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံထားရတဲ့အတှကျ စိုးရိမျသောကတှနေဲ့ စိတျပူပနျနရေပါတယျ..။
positive ဖွဈနတေဲ့ မိခငျဖွဈသူကိုကိုယျတိုငျပွုစုစောငျ့ရှောကျနရေပွီး ထပျကူးမှာစိုးလို့ ဖခငျနဲ့မောငျလေးကိုခှဲထားပမေယျ့ မောငျလေးကပါ နမေကောငျးဖွဈနတောကွောငျ့သှားချေါရငျး လမျးမှာ ကားဘေးတဈခွမျးလုံး ကွမှေသှားအောငျ ကားဖွတျတိုကျခံခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ..။
ကားတိုကျမှုကွောငျ့ ကြျောထှဋျဆှကေတော့ ခကျြခငျြးလိုကျသှားခဲ့ပွီး ပူပနျမှုတှကွေောငျ့ face shield အောကျက မကျြရညျလေးတှနေဲ့ဝမျးနညျးအားငယျနတေဲ့ ခဈြသူလေးရဲ့အကွညျ့ကို ကွညျ့ပွီး စိတျမကောငျးဖွဈလို့ နပေါတယျ..။
နနျးသူဇာက ခါးပတျပတျထားလို့ကွီးကွီးမားမား မထိခိုကျသှားပမေယျ့ ပုခုံးလညျသှားပွီး ယောငျနတေယျဆိုပွီးတော့လညျး ပွောပွထားသလို အိမျထဲထိဝငျပွီးမကူနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ကြျောထှဋျဆှကေ စိတျမကောငျးဖွဈနတောပါ..။
“သူ့အမေ positive ဖွဈလို့ အိမျကဉျြးလေးထဲမှာ ပွုစုဖို့ခကျမယျဆိုပွီးမောငျလေးနဲ့သူ့အဖကေို တဈခွားပို့ထားတာ။
မနကေ့သူ့မောငျလေးပါဖြားရော။ အဲ့တာနဲ့ဒီနေ့ သူကိုယျတိုငျပဲဝတျစုံပွညျ့နဲ့ သူ့မောငျလေးကို အိမျကိုသှားပွနျချေါလာခဲ့တာလမျးမှာကားဘေးတဈခွမျးကိုဖွတျတိုကျခံရတယျ။
ကြှနျတျောလညျး ခကျြခငျြးလိုကျသှားရတယျ။ ဘယျလောကျတောငျ pressure တှပေိထားလညျးမသိဘူး။
သူ့ face shield အောကျက မကျြရညျလေးတှေ နဲ့ အကွညျ့ကို အခုထိ မွငျယောငျတုနျးပဲ။
😔😔 လူက ခါးပါတျပါတျထားလို့ ဘာမှ မဖွဈသှားဘူးဆိုပမေယျ့ ပုခုံးတော့နဲနဲလညျသှားတယျထငျတယျ။ ယောငျနတေယျ။ကားကတော့ တဈခွမျးနီးပါးကွသှေားတယျ။ကြှနျတျောလညျးအခု အိမျမှာ လူကွီးတှရေော ကလေးတှရေော ရှိလို့ isolation လုပျရပါပွီ။
သဲလေးရေ… အဆိုးတှေ ကွိမျးကွသှေားတယျပဲ မှတျလိုကျပါ။ you are stronger than me. 💪🏾🙏🏻😔 I hate this July. 😔..” ဆိုပွီး
စိတျမကောငျးစှာ ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။မိသားစုကနျြးမာရေးအတှကျ ပူပနျနရှောတဲ့ ခဈြသူလေးရဲ့ လတျတလောအခွအေနတှေကေို ပွောပွထားတာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေလညျး နနျးသူဇာအတှကျ ဆုတောငျးအားပေးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။